Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo booqday qoyska gabar lagu diley Muqdisho | Somalia News
Golaha Wasiirada DF oo la ansixiyey
Kadib markii lagu guulaystay dadaal maalmahaan la isugu keenayay Baarlamaanka si Cod loogu qaado Golaha Wasiirada Cusub ayaa waxaa maanta Villa Hargeysa ka dhacay Cod u qaadida Golaha Wasiirada cusub.Cod Caqlabiyad ah ayaa lagu ansixiyey Wasiirada iyadoo ay xigtay dhaarintooda. Golaha Wasiirada Cusub ayaa shaqada wadaya Afarta bilood ee soo docota, wuxuuna Raysal wasaaruhu amray iney shaqooyinkooda la wareegaan. Puntlandi.com Muqdidho
Xukuumadda Rooble oo cod aqlabiyad leh lagu ansaxiyay iyo golaha cusub oo la dhaariyay
Share on Facebook Tweet on Twitter Kulanka golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo goordhow furmay ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha mudane, Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan. Kulanka oo ay goobjoog ahaayeen 188 xildhibaan ujeedkiisuna ahaa kalsooni siinta golaha wasiirrada cusub oo dhawaan uu soo magacaabay ra’iisul wasaaraha xukuumadda mudane, Maxamed Xuseen Rooble iyo barnaamijka xukuumadda ayaa waxaa khudbd ka horjeediyay golaha ra’iisul wasaaraha cusub isagoo ka hor akhriyay barnaamijka xukuumadda oo ay kamid yihiin sugida amniga,caddaaladd,kobcinta dhaqaalaha,xakameynta Covid-19,ilaalinta xuquuqul insaanka iyo qabsoomida doorashooyinka 2020-2021. Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xildhibaannada golaha shacabka ka codsaday in ay codka kalsoonida siiyaan golaha wasiirrada uu soo magacaabay si ay u dardar geliyaan howlaha horyaalla. Xildhibaannada oo codka kalsoonida u qaaday xukuumadda cusub ayaa waxaa oggolaatay 188,wax ka aamusay iyo wax diidayna majiraan sida uu sheegay guddoomiyaha golaha mudane Maxamed Mursal. Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa isla goobta ku dhaariyay xubnaha golaha wasiirrada cusub ee baarlamaanku uu meel mariyay. SHARE Facebook Twitter Previous articleCiidanka xoogga oo dilay horjoogihii Al-shabaab u qaabilsanaa Maaliyadda gobollada Shabeellooyinka
Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo booqday qoyska gabar lagu diley Muqdisho
Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa gurigooda ku booqday qoyska ay ka soo jeedo allaha u naxarisitee Marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo dhawaan kufsiga iyo dil loogu geestay Muqdisho.
Xildhibaanka ayaa booqashadiisa waxaa ku weheliyay General Cabdulaahi Bariise iyo guddoomiyaha degmada Deyniile Maxamed Abuukar Jacfar,waxana uu xildhibaanku ugu horeyn uga tacsiyadeeyay qoyska Xamdi Maxamed Faarax geerida naxdinta leh ee ku timid gabadhooda, waxa uuna sheegay in falkaasi ahaa mid ka argagaxeen dhamaan bulshada Soomaaliyeed ka Xildhibaan ahaana aad uga damqaday.
“Ugu horeyn Waxaan tacsi u dirayaa Qoyskii iyo dhamaan asxaabtii ay ka baxday Xamdi Maxamed, waa dhacdo xanuun badan oon la aqbali karin waxa gabadha ku dhacay, waxaana ka shaqeeneynaa sidii gabadhaasi cadaalad u heli laheyd” ayuu yiri Xildhibaan Dhuxulow oo ku tilmaamay dilka loo geystey mid aan la aqbali karin.
Xildhibaan Mustafa Dhuxulow oo ah Xildhibaan inta badan bulshada Soomaaliyeed arimahooda u dhaq dhaqaaqa aadna u caawiya ayaa noqday Xildhibaankii ugu horeeyay ee taga guriga gabadhii sida arxan darada ah loogu dilay Muqdisho ku nooleed, waxa uuna kamid yahay Xildhibaanka dadka sida weyn u raadinaya in gabadhaasi cadaalad hesho.
booqashada xildhibaan dhuxulow
Previous articleTwo Former Somali Cabinet Members Declare Presidential Bid – AllAfrica.com
Next articleAgaasime ku xigeenka Madaxtooyada Cabdinuur Maxamed oo xilka la wareegay
XOG: Kheyre oo safar Ujeedo qarsoon leh ku aadaya Turkiga & Wasiiro Wehlinaya
Xasan Cali Kheyre oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa Nairobi, kulamo iyo dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed ka waday ayaa la filayaa inuu u ambabaxo dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Musharax Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa magaalada Istanbul kaga horeeyo xubno ka mid ahaa Wasiiradiisii hore, waxaa la sheegayaa iney shir ku yeelan doonaan Istanbul Mr Kheyre iyo Kooxdiisa, si ololaha doorashada u xoojiyaan. Xasan Cali Kheyre oo xilka laga qaaday Bishii Julay, markii codka kalsoonida kala laabteen Xildhibaanada golaha shacabka ayaa u ordaya xilka ugu sareeya ee dalka, wuxuuna go’aankiisa ku shaaciyay Baraha uu ku leeyahay Internetka kuwaas oo ku xiran kumanaan taageerayaashiisa ah. Dad badan oo la socda siyaasadda dalka ayaa qaba in Kheyre uu ku deg degay qaadashada go’aankiisa ah tartanka doorashada sanadkan inuu ka qeyb galayo,iyadoo la ogyahay dhibaatadii uu ka geystay dalka mudadii uu Xafiiska joogay. Villa Soomaaliya ayaa wado qorshe ay ku sumcad dileyso Kheyre,islamarkaana uga gubeyso kaarkiisa musharaxnimo, sida aan xogta ku helnay. Xasan Cali Kheyre oo mudo saddex sano ah iyo bar ah hayay xilka Ra’iisal wasaaraha dalka ayaa lagu xusuustaa horumaro la taaban karo oo uu ka sameeyay Hay’adaha Dowladda, sida maaliyadda, kor u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha iyo xiriirka wanaagsan ay xukuumaddiisa la ahayd maamul goboleedyada. Dhanka kale, Magaalada Nairobi, waxaa ka socda olole xooggan oo ay wadaan siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan hoggaanka Xisbiyada dalka, waxaana magaalada dib ugu laabtay madaxweynihii hor ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo C/raxmaan C/shakuur Warsame oo labada muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Dubia.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa War yaab leh kasoo yeeray, kaasoo ku saabsan muranka ka dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Masar ee ku saabsan biyo xireenka weyn ee Renaissance (GERD). Trump oo ka hadlayey munaasabad uu ku shaaciyey xiriirka ay yeesheen dalalka Suudaan iyo Israa’iil ayaa sheegay in Itoobiya ay diiday heshiis uu soo diyaariyey oo ku saabsanaa biyo xireenka, arrintaasina ku dhammaan doonto inay Masar qarxiso Biyoo-xireenkaasi, isagoo. si cad u sheegay inay ahayd in Masar ay ka hortagto dhismaha biyo xireenka intii uu bilowga ahaa. Ad Warkan oo si weyn loola yaabay ayuu Madaxweynaha Mareykanka muujiyey sida uu uga careysan yahay inay Itoobiya diidan heshiis uu diyaariyey oo uu doonayay in dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ka gaareen muranka ka taagnaa biyo xireenka Itoobiya Renaissance. Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa u jawaabay Madaxweynaha Mareykanka, wuxuuna qoraal uu soo ku caddeeyay hanjabaaddda Itoobiya loo jeediyey aysan ahayn mid qabata oo cadaalad ah, isla markaana ka horjeedo qaranimada Itoobiya, iyadoo ku saleysan marin habaabin iyo faham darro si cad ugu xad gudbeysa Sharciga Caalamiga ah. Ra’iisal wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in wadahadalka Midowga Afrika ee arrinta biyo xireenka Renaissance uu meel fiican marayo, halka Afrikaan ahna loo raadinayo khilaafaadka dalalka Afrika. Warar Xul ah
Suudaan iyo Israel oo Dhidibbada u Taagay Xariirkooda
KHARTOUM(HALBEEG)-Suudaan iyo Israel ayaa Jimcihii si rasmi ah qalinka ugu wada-duugay heshiis nuxurkiisu yahay xariir ay yeeshaan labada dal. Heshiiska ayaa lagu beegay soo ifbixii warka sheegaya in Mareykanku uu Suudaan ka saaraay liiska dalalka gabbaadka siiya argagixisada. Dhisidda buundada xariirka ee Suudaan iyo Israel ayaa ka careysiisay shacabka Falastiin iyada oo taa baddalkeedana ay bogaadiyeen dalalka Masar iyo Imaaraadka. Heshiiska labada dal oo muddo la hadal hayay waxaa garwadeen ka ahaa dalka Mareykanka. Suudaan ayaa noqonaysa dalkii saddexaad ee muddo laba bil gudaheed ah qalinka ku duuga xariir uu la yeelanayo Israel. Post Views:25 Related Let’s block ads! (Why?)
Updated on October 24, 2020 9:55 am